Wikipedia:Maqaalka Cusub Bogga Hore/Hordhac - Wikipedia
Wikipedia:Maqaalka Cusub Bogga Hore/Hordhac
Waxay ka mid tahay Maqaalka Cusub Bogga Hore taasoo lagu soo ban dhigayo bogga hore si tira koob ah "Tirada Maqaalada". Hagaaji
Markii la go'aamiyo maqaal cusub:
U guuri qoraalka kaasoo ku jiray halkaan kaydka maqaalada cusub bogga qaybtiisa hoose.
Halkaan uga dar magaca maqaalka Template:Maqaalka Cusub Bogga Hore/Kala Hormarin.
Hadii aad taariikh ku beegeeyso, Fadlan maalin ku haboon ku aadi Template:Liiska Munaasabadaha Maqaalka Cusub Bogga Hore/Kala Hormarin.
Tirada Maqaalada Cusub wuxuu tilmaamayaa "9" Maqaal.
Maqaalka hadda tirsigiisu waa: 3
[[Wikipedia:Maqaalka Cusub Bogga Hore/3 |Wax ka bedelka maqaalka hadda]]
130 131 32 133 134 135 136 137 138 139
290 291 292 293 294 295 296 97 298 299
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Maqaalka_Cusub_Bogga_Hore/Hordhac&oldid=141166"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 4 May 2015, marka ee eheed 10:20.